Empire Holding Companyမှတင်သွင်းသောTeka Brandသစ် မီးဖိုချောင်းသုံးStanding Sink ဘေစင်သည်Stainless Steel ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး သုံးစွဲရလွယ်ကူသောမျက်နှာပြင်နှစ်ခုပါရှိ သည့်နောက်ဆုံးပေါ်Tekaနည်းပညာဖြစ်ပါသည်။မျက်နှာပြင်နှစ်ခုပါရှိသောကြောင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ထပ်ခါထပ်ခါအလွယ်တကူဆေးကြောနိုင်ပြီးသုံးစွဲရလွယ်ကူပါသည်StrandingSinkဘေစင်သည် ငွေရောင်ကာလာဖြစ်သောကြောင့်အစွန်းအထင်းအပေတေ ခံပါသည်။ ၄င်းမျက်နှစ်ပြင်နှစ်ခု၏အောက်တွင် အခြားပစ္စည်းများပါထားရှိနိုင်အောင်အပိုအောက်ခံပြားတစ်ထပ်ပါရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော teka တံဆိပ် မီးဖိုချောင်သုံး standing sink ဘေစင်ကိုသုံးစွဲသင့်ပါသည်။
GERMANY STANDARD အမှတ်တံဆိပ် ဘိုထိုင်များ
အိမ်တစ်အိမ်မှာ အရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အိမ်သာနှင့် ရေချိုးခန်းသုံး ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးမပြည့်မှီသော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုမိပါက ရေရှည်တွင် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ညစ်ရမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ Germany Standard အမှတ်တံဆိပ် ဘိုထိုင်များကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ German Technology အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည့်အတွက် ကြွေအရည်အသွေး အထူးကောင်းမွန်ပြီး Water Saving Technoloy ပါဝင်သောကြောင့် ရေအသုံးပြုမှုအထူးသက်သာပါသည်။ Germany Standard ဘိုထိုင်၏အားသာချက်များ - ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကြွေအရောင်စွန်းထင်းမှု မရှိခြင်း။ - အမာကြောဆုံး ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အလွယ်တကူ မအက်ကွဲနိုင်၊ အစင်းကြောင်း မပေါ်နိုင်ခြင်း။ - အဖုံးမှာ Slow Down စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ - အထိုင်၊ အထ အတွက်အဆင်အပြေဆုံး အမြင့်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက်အထူးသင့်လျော်ခြင်း။ (Not for Child) - အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း။ - အပိုပစ္စည်းများကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း။
နောက်ဆုံးပေါ် ဂျာမနီနိုင်ငံ နည်းပညာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားသော Teka Brandသစ် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည့် အညှော်စုပ်စက်(အနံ့ စုပ်စက်)ခေါ် Island Hoods ကိုStainless Steel အမျိုးစားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ခိုင်ခံ့သပ်ရပ်ပြီးသုံးစွဲရ လွယ်ကူပါ သည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏မီးဖိုချောင်တွင်ရှိသော ညှော်နံ့ဆီနံ့ အစရှိသည်တို့ ကို စုပ်ယူ ရှင်းလင်းပေးသောကြောင့်ု လူကြီးမင်းတို့ ၏ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အထောက်အကူပြုသော Teka တံဆိပ် island hood ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။လူကြီး မင်းတို့ ၏ မီးဖိုချောင်လိုအပ်ချက်များကို စိတ်ကျေနပ်မှု့ ရစေရန်ရည်ရွယ်၍ထုတ်လုပ် ထားပါ သည်။
Empire Holding Companyမှတင်သွင်းသောTeka Brand ရေချိုးခန်းသုံး၊မီးဖိုချောင်သုံး အငွေ့ စုပ်စက်(pyramidal filter)သည်အရည်သွေးကောင်းမွန်သော Stainless Steel အမျိုးစားဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ခိုင်ခံ့လှသော ကိုယ်ထည်ထိန်းချုပ်ရ လွယ်ကူသောMechanically Controlလည်းပါဝင်သောကြောင့် သုံးစွဲရာမှာလည်း ရိုးရှင်း ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏ မီိးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းတို့ တွင် စွဲကပ်နေသော အနံ့ များ ကိုလည်း စုပ်ယူဖယ်ရှားပေးပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် Tekaအမှတ် တံဆိပ်အငွေ့ စုပ်စက် ကိုဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Empire Holding Company Teka ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
WALL-HUNG BASIN နံရံကပ် လက်ဆေး ဘေစင်
ခေတ်မှီ ဆန်းသစ်ပြီး သေသပ်လှပသည့် ရေချိုးခန်းသုံး ပရိဘောဂ ပစ္စည်း ဘေစင် ( Basin )
Homeplus Trading ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ် လုပ်ထားသည့် ရေချိုးခန်းသုံးပရိဘောဂ ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ဘေစင် ( Basin ) ကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း ပစ္စည်းများသည် လူကြီးမင်းတို့ ၏ ရေချိုးခန်း များတွင် အလှဆင်နိုင်သည့် အပြင် အသုံးဝင် သော ရေချိုးခန်းသုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် ၄င်း ဘေစင် ( Basin ) သည် သန့် ရှင်းသပ်ရပ် လှပသည့် အပြင် ကြာရှည် လည်း အသုံးခံပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ရေချိုးခန်းသုံးပရိဘောဂ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ဘေစင် ( Basin ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက Homeplus Trading ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Empire Holding Companyမှတင်သွင်းသော Tekaအမှတ်တံဆိပ် မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်း Hob Plate(Vitroceramic Hob efx 30 h)အမျိုးစားသည် လူကြီးမင်းတို့ အတွက်အလွန် အသုံးဝင်သော Hob Plateအမျိုးစားတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏ နေအိမ် မီးဖိုဆောင်၌ အစားသောက်ချက်ပြုတ်ရာတွင် vitroceramic hob plateသည် သုံးစွဲရ လွယ်ကူပြီး အချိန်ကုန်လည်း သက်သာပါသည်။vitroceramic hob plateသည် ပါးလွှာသော မျက်နှာပြင်နှင့် ပေါ့ပါးသော ကိုယ်ထည်ဖြစ်သောကြောင့် သယ်ဆောင်ရ လည်းလွယ်ကူပါသည်။ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် vitroceramic hob plate ကိုဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက Empire Holding Company ကိုဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါတယ်။
The freestanding bath shall be 1854 mm in length, 904 mm in width, and 570 mm in height. Bath shall be made of acrylic and reinforced with fiberglass. Bath shall have adjustable feet. Bath shall include apron and pop-up drain and overflow.